Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Alatsinainy Smart ao amin'ny IMEX America: Fihaonana amin'ny namana taloha
IMEX America Smart Alatsinainy
"Toy ny tontolo vaovao ho an'ny indostriantsika ity ary manome fanantenana aho fa ho taona matanjaka ny taona 2022." Ny mpividy Valeria Serrano, avy amin'ny CTA Event design sy DMC any Mexico, dia namintina ny hafaliana sy ny fientanam-po tsapa tamin'ny andro fianarana mialoha ny fampisehoana an'ny IMEX America, Smart Monday, powered by MPI. “Toy ny fihaonan’ny mpinamana taloha izany”, hoy izy nanohy. "Mifandray indray amin'ireo namako amin'ny indostria aho ary manana fivoriana maro voalamina mandritra ny andro vitsivitsy."
Nanakoako mafy sy nazava tamin'ny maro ny herin'ny traikefa mivantana.
Ny Alatsinainy Smart, ampiasain'ny MPI, natao ny Alatsinainy 8 Novambra, dia andro natokana hianarana mialoha ny fampisehoana alohan'ny IMEX America.
Ny andro dia natomboka tamin'ny lahateny lehibe nataon'i Dr. Shimi Kang, dokotera mpitsabo, mpikaroka ary manam-pahaizana momba ny neuroscience nahazo loka nahazo mari-pankasitrahana.
Ny mpividy Donna Rogers, avy ao amin'ny Solus Sustainable Hydration any California, dia nanaiky hoe: "Efa nofenoiko tamin'ny fihaonana mivantana sy hetsika amin'ny tambajotra ny kalandrie an'ny lehibeko!"
Nanakoako mafy sy nazava tamin'ny maro ny herin'ny traikefa mivantana sy mivantana tamin'ny olona maro araka ny fanazavan'ilay mpividy nampiantrano an'i Shelby Green, avy ao amin'ny Vondrona Enterprise Events any Kalifornia, hoe: “Tena faly aho mahita olona indray – ary faly aho fa tsy nanao antso an-tsary hafa. !”
Ny fihaonambe sy ny hetsika dia mpiandraikitra ny fahasalaman'ny olombelona
Ny Alatsinainy Smart, ampiasain'ny MPI, natao ny Alatsinainy 8 Novambra, dia andro natokana ho an'ny fianarana mialoha ny fampisehoana Amerika IMEX izay manomboka rahampitso ka hatramin’ny 11 novambra ao amin’ny Mandalay Bay, Las Vegas.
Ny andro dia natomboka tamin'ny lahateny lehibe nataon'i Dr. Shimi Kang, dokotera mpitsabo, mpikaroka ary manam-pahaizana momba ny neuroscience nahazo loka nahazo mari-pankasitrahana. Tamin'ny fotoam-pivoriana nataony, Navigating ny zava-misy mifanohitra: adin-tsaina sy fanavaozana tamin'ny taonjato faha-21, Shimi dia nanasongadina ny fomba ahazoan'ny matihanina amin'ny hetsika ny fifandraisana fototra misy eo amin'ny traikefa mifanatrika sy ny fahasalamana ara-tsaina manao hoe: "Matihanina ara-pahasalamana daholo ianareo - fantatrao fa mila fivoriana isika, mila fihaonambe, mila fanazavana. Zava-dehibe ny fananana izany ho ampahany amin'ny traikefantsika olombelona - ny fihaonambe sy ny hetsika dia mpiandraikitra ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny herin'ny natiora hanamafisana ny fahasalamana sy hanatsara ny traikefan'ny hetsika no nifantohan'ny Nature of Space - Ecosystem ho an'ny fahombiazan'ny hetsika. Janet Sperstad, Talen'ny Fakiolte ao amin'ny Kolejy Madison, dia nanao fitsirihana lalina tamin'ny taratasy fotsy IMEX "Nature of space" navoakany vao haingana. Nanome tari-dalana momba ny fomba fanaterana traikefa amin'ny hetsika mivantana izay "manala ny hetahetan'ny fifandraisana manokana sy ny fiaraha-monina." Ny fikarohana nataony dia manasongadina ny fomba fampifanarahana ireo lesona tsara indrindra avy amin'ny natiora mba hamoronana hetsika mahomby, toy ny fampiasana jiro, habaka ary tontolo iainana mba hanentanana ny fanavaozana.
Fotoana takamoa - ny herin'ny faharetana
Ny olana ara-tontolo iainana no lohany sy ivon'ny Fihaonana nifantohan'ny fitsangatsanganana niaraka tamin'ny MGM Resorts – fijery manokana ambadiky ny sehatra momba ny ezaka maharitra ataon'ny Helodranon'i Mandalay. Nampahafantarina ny mpandray anjara ny laharan'ny masoandro tafo lehibe indrindra any Etazonia izay mipetraka miaraka amin'ny fepetra hafa mahasoa ny planeta toy ny fako sakafo sy ny fanasokajiana ny fako amin'ny toby fanodinana 11 manerana ny toeram-ponenana. Ny asa sarotra indrindra? Manova ny takamoa ho LED mitsitsy angovo – 1.4 tapitrisa izy rehetra!
Ny fitsidihan'ny MGM's Meeting centric dia ampahany amin'ny fandaharana fitsangatsanganana natao tamin'ny Smart Monday, izay manome fahafahana hifandray ivelan'ny efitrano fampisehoana. Ny fitsidihan'ny Lip-Smacking Foodie dia nizara ny ambany tao Las Vegas niaraka tamin'ny sakafo tsara indrindra tao amin'ny Strip, raha nampanantena takariva tsy manam-paharoa ny Mystery Trip ahitana traikefa tsy manam-paharoa, toerana mangatsiaka, sakafo mahafinaritra ary orinasa lehibe.
Ny teknôlôjian'ny hetsika dia misongadina indrindra amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny mpikarakara fivoriana maro ary nodinihina tamin'ny fotoam-pivoriana, anisan'izany ny EventMB Event Innovation Lab ™. Ny kilasin'ny fandrindrana hetsika, natao ho an'ny drafitry ny orinasa sy ny masoivoho, dia nanolotra fomba fiasa azo ampiharina amin'ny fandrindrana, fivarotana ary fanaterana hetsika. Nampiasa fandalinana tranga sy fifanakalozana fomba fanao tsara indrindra ny fivoriana ifanakalozan-kevitra mba hizarana votoaty vaovao mifandraika amin'ny tontolon'ny hetsika sy ny fandrindrana hetsika manankarena teknolojia.
Zephia Bryant, mpividy fampiantranoana avy amin'ny Bryant Educational Leadership Group any Caroline Avaratra, dia nanazava ny antony nahatonga ilay lohahevitra nanakoako taminy, "Maro amin'ireo hetsika nataoko no voatery nivadika ho hybrid ka nijery fomba fanao tsara indrindra sy fomba vaovao aho."
Misokatra rahampitso ny IMEX America, Talata 9 Novambra, ary mitohy hatramin'ny 11 Novambra ao amin'ny Mandalay Bay, Las Vegas.
November 22, 2021 amin'ny 04: 10
Fantatry ny rehetra fa ny fisakaizana dia manamarika fiainana lalina kokoa noho ny fitiavana. Indray mandeha ianao dia mahita namana taloha ary toy ny mikaroka ao amin'ny trano fonenana feno vovoka sy antitra ary mahita harena. Fomba tsara iray hafa hamelomana ny fahatsiarovana ny fitsidihana toerana niarahanao taloha.